စက်ရုပ်ဆန်တဲ့ဘဝတွေမှာ emotionတွေဝင်လာတော့ ပျော်စရာလား။ ကြေကွဲစရာလား။ ယုန်ကလေးကို သနားတယ်။ အဲဒီလူကို သနားတယ်။ ဝတ္တုဆုံးတော့ မွန်းကျပ်ကျပ်နဲ့တောင်ကုန်းလေးပေါ်ပြေးမိတယ်။...စောင့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်ပန်ဒိုရာ။
သာမာန်လူသားတစ်ယောက် ရဲ့ အဇ္ဇျတ္တကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်..စိတ်အလျဉ်ဝတ္တု လို ဆိုနိုင်မလား..အတွင်းစိတ်ကိုအလွှာလိုက်ပါးပါးလေးမြင်ခိုင်းထားတယ်..ယုန်ကလေးကိုတက်နင်းလိုက်တဲ့ အချိန်က..ဒီဝတ္တုမှာစာဖတ်သူ မျှော်လင့်မထားတဲ့ climax လို့ ဆိုချင်တယ်..Oh..No! လို့ အော်မိမတတ်ပါပဲ..
(ယုန်ကလေး တစ်ကောင် ရောက်လာတယ် ပြီးတော့ သေသွားတယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဟာ လူတစ်ဦးအတွက် တစ်နေ့တာ ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့တာလား.).ဆိုတဲ့..နေရာအရောက်မှာ အပေါ် က ခံစားလိုက်ရတဲ့ tempo လေး နည်းနည်းများ..ထစ်သွားသလားလို့ .ဘာလို့ လဲဆိုတော့.ကျွန်တော်ကဒီ message ကိုအပေါ်ကဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာ အဲဒီအတိုင်းပဲ.ဘယ်သူမှဝင်ပြောစရာမလိုပဲ.ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရလိုက်ပြီးပြီ..ဆက်မဖတ်ခင်မှာပဲ..အဲဒိးုင်ယာရီနဲ့လူကိုအပြစ်တွေတင်မိနေပြီ….အဲလိုထပ်တူခံစားနေတုန်းမှာ..အဲဒီအဖွဲ့ဝင်လာတော့..ဇာတ်ကောင်က..သူ ပြောချင်တာဝင်ရှင်းပြသလိုဖြစ်သွားသလားလို ဒီအတိုင်းလေးထားလိုက်ရင်ပိုလှသွားမယ်..ထင်..တယ်..ကျွန်တော်ကမပန်လောက်မရေးတတတ်ပါဘူး…ဒါပေမယ့်..သူ့ စိတ်ထဲကဖြစ်သွား..ပြောသွားတဲ့အတိုင်းရေးထားတဲ့အဖွဲ့ ဆိုရင်လဲ..တစ်မျိုးကောင်းနေမှာပါ…ကိုယ်ဆိုရင်လဲစိတ်ထဲ..အဲလိုဖြစ်လာနိုင်ကောင်းတာကိုး..
အချုပ်ဆိုရရင်တော့..အင်မတန်..ကျစ်လစ်..ပြီး..ဖွဲ့ စည်းပုံကောင်းတဲ့..ခေတ်အရေးအသားပါပဲ..ရက်စက်ခြင်း၊အတ္တ၊သိမ်မွေ့ ခြင်း၊စတာတွေရောယှက်ထားတဲ့သိစိတ်အလျဉ်ဝတ္တုကောင်းတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုပါရစေ…
အော...ဒါနဲ့ (လက်ထဲမှာတစ်ခုခုကိုင်ထားသည် ) ဆိုတော့..နှစ်ကူးပိတ်ရက်အတွက် ဟိုပုလင်းများလားလို့ ..
ဒါပေမယ့် သူ့ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက် ရုံးခန်းတွေက သူနဲ့ရာထူးတူ သို့သော် သူတို့လူမျိုးတူများ အတွက်တော့ သူတို့တွေက အနည်းငယ် ပို အလေးထား ဂရုစိုက်လေ့ ရှိသလားဆိုသော အတွေးကိုတော့ သူ့ခေါင်းထဲ ၀င်လာတိုင်း ပြန်ထွေးထွေးထုတ်ရသည်။
မတန်ခူးရေ အတူနီးပါး ခံစားသိမြင်ပေးနိုင်တာ ကျေးဇူးတင်တယ်။ စောင့်ဖတ်တဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။
ကိုမောင်ရင် . အကြံပြုချက်ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်။ သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး သုံးသပ်သွားလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယောဟန်အောင်။ ကိုဆောင်းယွန်းလ။ အားလုံးကျေးဇူးပါ။
မမပန်…ဒိုင်ယာရီကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ ခံစားလိုက်ရတယ်…ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးလဲ ဆိုတာတော့ ပြောမပြတတ်ဘူး…။ ယုန်ကလေးကို သနားတာလား…၀တ္ထုထဲက `သူ´ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ အထီးကျန်ဘ၀ကို မွန်းကြပ်မိတာလား… ဒါမှမဟုတ် ယုန်လေးတစ်ကောင် သေသွားတာက လူတစ်ယောက်အတွက် ဒိုင်ယာရီထဲမှာ မှတ်တမ်းတင်စရာ ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုအဖြစ် ခဏတာ သဘောထားလိုက်တဲ့ လူ့အတ္တကို လျပ်တပြက် မြင်လိုက်ရတဲ့ အတွက်ကြောင့်လား…။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိပေမယ့် တစ်ခုခု ရင်ထဲမှာ ကျန်သွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ မမပန်ရေ…။
ပန်ဒိုရာကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ ခံစားချက်ကို ပီပြင်အောင် ရေးဖွဲ့နိုင်သော အနုပညာအစွမ်းကို သေချာချပြထားသော ပို့စ်လေးပါပဲ။ မွန်းကျပ်ကျပ် မြို့ပြက လူလုပ် သဘာဝတွေနဲ့ မပျော်ဘူးနော်…
လာဖတ်သွားပါတယ်။ ကောင်းလွန်းလို့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးရမှန်းတောင် မသိဘူး။ ကျွန်မတော့ ဒီလိုစာမျိုးကို ဒီတသက် ရေးတတ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး။
အရေးအဖွဲ့နဲ့ အတွေးကို ပြောတာပါ၊
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီလို ရေးတတ်ချင်တာ၊
Congratulation....Daw Pandora.... :)